घर रसाउने-चुहिने कारण के हो, कसरी गर्ने समाधान? :: Setopati
तस्बिर सौजन्यः स्किल सेवा
हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि अधिकांश घरमा समस्या आइपर्छ। ढल थुनिनु, शौचालय जाम हुनु, लेउ जम्नु, पानी ट्यांकी फोहोर हुनु सामान्य समस्या हुन्। यी सामान्य सम्भारले समाधान गर्न सकिन्छ। भित्ता रसाउने, ओसिलो हुने, छत चुहिने समस्याले भने सोचेभन्दा धेरै दुःख दिन सक्छ।
सजिलोगरी भन्दा यी समस्या घरका रोग हुन्। सानो छँदै समाधान खोजिएन भने यसले पूरै घरलाई क्षति पुर्‍याउँछ।
बर्खा सुरू भएपछि घरमा देखिने समस्या र समाधानका उपायबारे हामीले मर्मत-सम्भार तथा निर्माण परामर्श कम्पनी 'स्किल सेवा– घरको डाक्टर' का सञ्चालक तथा इञ्जिनियर रमेश तिमल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं।
उनका अनुसार नेपालका अधिकांश घर रसाउने, ओसिलो हुने, चुहिने समस्या (सिपेज) हुन्छ। कतिपयले बेलैमा थाहा पाउँछन् भने कतिलाई समस्याको कारणै थाहा हुँदैन।
सिपेजले भित्तामा दाग पर्ने, रङ फुलाउने, विस्तारै पत्रपत्र उप्काउने जस्ता समस्या ल्याउँछ। यी सुरूआती लक्षण हुन्। समस्या बढ्दै जाँदा निरन्तर पानीका थोपा झर्न थाल्छ। यस्तो ठाउँ फोहोर देखिन्छ नै, सफा गर्न उत्तिकै मुश्किल हुन्छ।
'ढुसी र किटाणुले कोठा प्रदूषित पनि पार्छ,' तिमल्सिनाले भने।
सिपेज समाधानबारे चर्चा गर्नुअघि यसको कारण जान्नुपर्ने हुन्छ। समस्याको जरो पत्ता लगाउन सक्यौं भने समाधान खोज्न सकिन्छ र फेरि–फेरि निर्माणको काम गर्दा सजग हुन सक्छौं।
सिपेजको मुख्य कारक पाइपलाइनलाई मानिन्छ। घरमा आउने सफा पानीदेखि घरबाट निस्किने फोहोर पानी सबै पाइपलाइन हुँदै जान्छ। यस्तो पाइप लगाउँदा हुने सानो गल्तीले घरमा ठूलो समस्या निम्त्याउने इञ्जिनियर तिमल्सिना बताउँछन्।
उनका अनुसार पाइपसँगै जोडिएर आउने पानी ट्यांकी चुहावट सिपेजको अर्को समस्या हो।
'अन्डरग्राउन्ड पानी ट्यांकी बनाउनेबेला लापर्बाही गरे चर्किन्छ र पानी रसाउँछ। यसले सिधै घरको जग वा भुइँतलाको भित्तामा असर देखाउँछ,' उनले भने।
त्यस्तै कम गुणस्तरीय पाइप राख्दा फिटिङ राम्ररी हुँदैन। फिटिङ राम्रो नभएपछि माथिल्लो तलाका भित्तामा समेत पानी रसाउने र चुहिने समस्या सिर्जना हुन्छ।
घर बनेको जग्गामुनि प्रशस्त पानी भएको अवस्थामा पनि ओस लाग्ने, प्लास्टर र रङ उक्किन्छ। तिमल्सिनाले भने, 'गहिरो जग्गा, पहिले पोखरी भएको स्थान, तराइमा डुबान परेका ठाउँमा यस्तो समस्या देखिन्छ।'
यस्तै अर्को मुख्य कारण हो, छत निर्माणमा हुने लापर्बाही। छत बनाउँदा लेबलिङ वा फिनिसिङ राम्रो नभए कुनै भागमा पानी जम्न सक्छ। त्यसले उपयुक्त ढलान हुनमा असर गर्छ। ढलानपछि राम्रोसँग पानी राखिएन भने पनि विस्तारै चिरा पर्दै पानी चुहिने समस्या आउने इञ्जिनियर तिमल्सिनाले बताए।
यसबाहेक हामी बिना जानकारी जथाभावी पाइपलाइन वा ढलानसम्म मर्मत गर्न पनि तम्सिन्छौं। यस्तो बेला सानो कुरा मिलेन भने सिपेज समस्या आउन सक्छ। अनि सँगै जोडिएको घरमा भएको सिपेज समस्या अर्को घरमा सर्न पनि सक्छ।
समयमै समाधान नगरे पानी पस्ने, फोहोर देखिने मात्र नभइ बिजुली लाइनमा पानी पसेर दुर्घटना समेत हुनसक्ने इञ्जिनियर तिमल्सिना बताउँछन्। त्यस्तै पानीकै कारण ढलान वा पिलरमा भएका फलामे छडमा खिया लाग्ने र ढलान नै फुटाउने सम्भावना रहन्छ।
'पानी परेपछि फलामको मोटाइ दुई गुणासम्म बढ्छ। जसले छत वा भित्ता चर्काउने वा फुटाउने समस्या ल्याउँछ,' उनले भने, 'बिजुली आपूर्ति विन्दुसम्म पुग्यो भने करेन्ट लाग्ने, सट हुने हुन्छ।'
रङ उक्किनु, खुइलिनु, काठका झ्यालढोका र अन्य फर्निचरमा ढुसी लाग्नु पनि सिपेजले निम्त्याउने समस्या हुन्। यो सबैको समाधान गर्दा खर्च बढ्ने त भइहाल्यो।
सिपेज देखिने स्थान र समाधानः
सहरी क्षेत्रमा घरहरू एकआपसमा जोडिएका हुन्छन्। जोडिएको भागमा दुवै पक्षले प्लास्टर गरेका हुँदैनन्। साना–साना छिद्रहरू परेका हुन्छन्। यसमा बर्खाको पानी पस्नाले घरको भित्रैसम्म आइ समस्या बढाइदिन्छ।
इञ्जिनियर तिमल्सिनाका अनुसार जोडेर बनाइएका घरमा चुहावट देखिए माथिल्लो भागमा प्लास्टर गरेर सिमेन्टको घोल हाल्ने चलन छ। तर यो बिल्कुलै गलत अभ्यास हो। घामपानीले सिमेन्टको घोल हालेको ठाउँमा मसिनो चिरा पारिदिन्छ र फेरि सिपेज हुन्छ। समस्या समाधान हुँदैन। उल्टै खर्च बढाउँछ।
उसो भए के गर्ने?
'दुवै घरको एक फिट चौडाइसम्म फुटाएर सतह राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि इँटासम्म पुग्नेगरी प्लास्टर गरेर सिपेज नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। कुनै पनि ढलानमा सिमेन्ट घोल मात्रै हालेर छाड्नु हुँदैन।'
त्यस्तै टायल लगाउँदा हुने सानो लापर्बाहीले सिपेज निम्त्याउन सक्छ। धेरैलाई टायलको जोडाइमा खाली ठाउँ राखे पानी पस्ने भ्रम हुन्छ।
'टायल राखेपछि त्यसलाई फैलिने थोरै ठाउँ चाहिन्छ। ठाउँ खाली नराखी कसिलो सेट गर्दा चर्किने-फुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि त्यसमा हुने स–साना छिद्रबाट झन् सजिलै पानी पस्छ। विस्तारै सिलिङ, भित्तामा ओस देखा पर्छ,' उनले भने।
त्यसैले टायल लगाउँदा 'स्पेसर' प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसबाट टायल एकै तहमा छ/छैन थाहा हुन्छ। पछि टायल फैलिने ठाउँ पनि रहन्छ।
टायल लगाइसकिएको भए काटेर सफा गर्नुपर्ने तिमल्सिना बताउँछन्। आफैं समस्या पहिचान गर्न नसके प्राविधिकसँग सुझाव लिनुपर्ने बताउँदै उनले थपे, 'प्राविधिक कुरा सबैलाई ज्ञान हुन्छ भन्ने छैन। समस्या सानो हुँदै चासो दिए ठूलो क्षतिबाट बच्न सकिन्छ।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार ३०, २०७८, १५:००:००